पाँचै औला बराबर हुन्नन् । हरेक मान्छेको स्वभाव फरक फरक हुन्छ : गायिका गीता सेन्चुरी – Complete Nepali News Portal
पाँचै औला बराबर हुन्नन् । हरेक मान्छेको स्वभाव फरक फरक हुन्छ : गायिका गीता सेन्चुरी
June 3, 2017	382 Views
धादिङ्ग कुमपुर, आदिममा बुवा देब बहादुर सुनार र आमा सानीमाया सुनारको कोखबाट २०४७ साउन २२ गते पछिल्लो समयकी आश लाग्दी मिठो स्वरकी धनी एबम् ब्यवहारीक गायिका गता सेन्चुरी पछिल्लो समय गीत सँगीत सँगै देश तथा बिदेशका स्टेज कार्यक्रमहरुमा ब्यस्त हुन थालेकी छिन् । उनले हाल सम्म २ दर्जन भन्दा बढी गीतमा स्वर दिईसकेकी छिन् । उनलाई चिनाउनुमा मुलको पानी गीतको हात रहेको छ । उनै पछिल्लो समयकी आश लाग्दी गायिका गीता सेन्चुरी सँग हाम्रा संबाददाता प्रकाश बराईली “अभिब्यक्ती” ले लिएको अन्तरबार्ता जस्ताको त्यस्तै ः
१, तपाईको बाल्यकाल कसरी बित्यो ?
मेरो बाल्यकाल चार जना दाजु १ जना दिदी हुनुहुन्छ । सानै देखी भाउजुहरुसँग हुर्केको मान्छे हु म । दुखको अनुभव छैन । सानो छदा अग्रज दाजु दिदीको गीतहरु गुनगुनाउने गर्थे । यसरी नै बित्यो भन्नुपर्छ ।
२, साँगीतीक क्षेत्रको सुरुवात कसरी भयो ?
मेरो सानै देखीको रुची हो । आफ्नै कान्छो दाई क्षीतीज अबिरल सेन्चुरी उहाँ गायक भएको कारणले उहाको सपोर्ट र प्रेरणाले मलाई सजिलो भयो ।
३, गीत सँगीतमा खुट्टा तान्ने प्रबृती छ भन्छन् के लाग्छ तपाईलाई ?
पक्कैपनि छन् । हरेक कामको पछाडी खुट्टा तान्ने मान्छे हुन्छन् । यस क्षेत्रमा पनि अन्य भन्दा बढी हुन्छन् ।
४, तपाईको बिचारमा गीत सँगीत के हो त ?
गीत सँगीत सुख दुखको साथी हो र मेरो लागी एउटा नशा पनि हो । जुन बिना म बाँच्न सक्दीन ।
५, कतिपय कलाकारहरुले आफ्नो संघर्षको बेला सपोर्ट गर्ने ब्यक्तीलाई भुल्ने गर्छन् भन्ने सुनिन्छ । यसो गर्नु कस्तो हो । के लाग्छ तपाईलाई ?
पाँचै औला बराबर हुन्नन् । हरेक मान्छेको स्वभाव फरक फरक हुन्छ । सबै मान्छे एकै किसिमको हुन्नन् । यसो गर्नु भनेको मुर्खता हो । सपोर्ट गर्ने मान्छेलाई भगवान सरह सम्झीनुपर्छ ।
६, तपाईका आगामी योजनाहरु के के छन् ?
आगामी दिनमा यस क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने सोंच छ । अब तिज पनि नजिक आउन थाल्यो । त्यसैले तीज गीतको तयारीमा छु ।
७, सबले गीता सेन्चुरी ईमान्दार, सोझी, भद्र, मिठो बोली अनि ब्यवहारीक हुनुहुन्छ भन्छन् नी के यो साचो हो ?
मेरो मुल्याङ्कन मैले गर्ने होईन अरुले गर्ने हो । जे देख्नु भयो त्यस्तै भन्नु भएको होला । मलाई कसैसँग नराम्रो हुनु छैन ।
८, गीत सँगीतमा लाग्नुको उद्देश्य केही थियो की ?
मेरो सा नै देखीको रुची यस क्षेत्रमा लाग्नु थियो । सानै देखी गीत सुन्ने गर्थे । कलाकार मर्दा न्युज आउने गथ्र्यो । मपनि मर्दा यसै गरी चर्चा होस् भन्ने चाहन्थे । मर्नु अघि नाम कमाउ अनि मरौ भन्ने चाहना पुरा गर्नु मेरो उद्देश्य थियो ।
९, यस क्षेत्रमा खर्च बढी तर प्रतिफल कम हुँदा पनि नयाँ कलाकारहरुको ओईरो लाग्नुमा के ठान्नुहुन्छ ?
कतिपयलाई रहर हुन्छ भने कतिपयको आफ्नो कला हुन्छ र अगाडी बढ्छु भन्ने कोसिस गरेको हुन्छ । गीत सँगीतलाई जोगाउन नयाँ कलाकार जन्मिनै पर्छ । पुराना कलाकार बितेपछि को कलाकार नै रहन्छर । त्यसैले नयाँ कलाकार आउनु राम्रो हो ।
१०, आफुले ५, ६ महिना पालेर बेचेको बाख्राले त पुरानो गोठालो देखेपछि चिनेर कराउछ भने कतिपय कलाकारहरु पुरानो ब्यक्ती, पुरानो सपोर्टलाई भुल्छन् । देखेपनि नदेखे जस्तो गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नी । के लाग्छ तपाईलाई ?
सबै मान्छेको सोंच एउटै हुदैन । मान्छे पिच्छे फरक फरक सोचाई हुन्छ । यसो गर्नु भनेको अहम्ता देखाउनु घमण्ड गर्नु हो । यस्ता ब्यक्ती धेरै टिक्न सक्दैनन् । सबै पहेलो चिज सुुन हुने भए पित्तल के लाई भन्ने । सबै ब्यक्ती राम्रा पनि हुदैनन् र सबै ब्यक्ती नराम्रा पनि हुदैनन् । यस्ता ब्यक्ती त पशु भन्दा नी खत्तम हुन् । पशुले त गोठालोलाई चिन्छ भने यस्तो ब्यवहार देखाउनु भनेको निज ब्यवहार हो।
११, बिगतमा तपाई साथ सपोर्ट गर्ने ब्यक्ती को को हुन् ?
मलाई यो क्षेत्रमा साथ सपोर्ट गर्ने ब्यक्ती कमल ओली, अमृत खाती, जेबी ओली, भिमसेन खतिवडा, माधव थापा, दाजु क्षीतीज अबिरल सेन्चुरी, मेरो घर परिवार लगायत अग्रज दाजु दिदिहरु हुनुहुन्छ । उहाँकै साथ सपोर्टले गर्दा यो स्थानमा आएकी हुँ ।
१२, अन्तमा तपाईको शुभचिन्तकहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
आज सम्म गीता सेन्च’री भनेर माया गर्नु भा छ । मेरा गीतहरुलाई माया गर्नु भा छ । आगामी दिनमा पनि मेरा गीतहरुलाई माया गर्नुहोला । नेपाली गीत सँगीतलाई माया गर्नुहोला यही भन्न चाहन्छु । – अनलाइनरफ्तार बाट